NGOKUCHANEKILEYO INDLELA ENDIZIQHELANISE NGAYO NOKUPHULUKANA NEEPONTI EZINGAMA-50 | UTHINTELO - UKUPHULUKANA NOBUNZIMA AMABALI EMPUMELELO
Ngokuchanekileyo Indlela endiziqhelanise ngayo nokuPhulukana neeponti ezingama-50
Ngokuqinisekileyo, wena ayinakukubaleka ukutya okungalunganga . Kodwa oko akuthethi ukuba akufuneki ubaleke (okanye ibhayisekile, okanye uhambe, okanye uqubha). Ukuba esebenzayo ngokwasemzimbeni —Nangona nje incinane — yandisa ubomi obude, iphucula ukulala, yomeleza amathambo nezihlunu, kwaye ikhusela kwisifo sentliziyo, isifo seswekile, isifo sengqondo esixhalabisayo kunye noxinzelelo. Kananjalo-kunye nokukhetha okuhle ekhitshini-kunokukunceda ukuba uphalaze iipawundi ezingafunekiyo kwaye uzigcine.
Sibuze abasetyhini abasi-7 abaphulukene neepawundi ezingama-50 okanye nangaphezulu ukuba babelane ngokuziqhelanisa nokuncipha kobunzima, kwaye iziphumo zahluka ngokumangalisayo. Akunyanzelekanga ukuba ulingane nohlobo olunye lomthambo-kufuneka ufumane into encamathelayo. Nantsi indlela abayifumene ngayo impumelelo yexesha elide. ( Fumana isisu esisicaba kwimizuzu nje eli-10 ngosuku ngesicwangciso sokuzivocavoca esivavanywe ngumfundi !)
Utyando olwenziwe ngesisu lwanceda uJolie wanciphisa phantse iiponti ezingama-400. Malunga neminyaka eli-10 eyadlulayo, wayepleyite nge-200, kodwa wayengonelisekanga. Andizange ndisebenze, kodwa ndiyakuthanda ukudanisa, utshilo. Umhlobo ucebise ukuba Umsebenzi kaVixen , iklasi yokudanisa yehip-hop Cardio yabasetyhini, kwaye yayi luthando ekuqaleni ukubila. 'Ndaba liqela elipheleleyo,' utshilo uJolie. Waqala ukuhamba yonke imihla, ngamanye amaxesha kabini ngemini, kwaye enciphisa iikhalori zakhe, kwaye kwiinyanga ezi-4 wayewisile iiponti ezingama-60. 'Ndiziva ndonwabile endakha ndaziva ebomini bam kwiminyaka engama-42, utshilo. Bendihlala ndicinga ukuba ngekhe ndiphumelele ekuzilolongeni de ndifumane umdaniso. Imalunga nokufumana into oyithandayo kunye nokungaguquguquki. Ndibubungqina obuphilayo. Yeyona nto intle endakha ndayenza. '
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Imizuzu engama-60 yomdaniso we-cardio, iintsuku ezisi-7 ngeveki
UAlina Burroughs UAlina Burroughs
Xa uAlina, ngoku owayeneminyaka engama-39 ubudala, kwafunyaniswa ukuba une-polycystic ovary syndrome kwaye waxelelwa ukuba kungenza kube nzima kuye ukuba nabantwana, wagqiba kwelokuba lixesha lokuba enze utshintsho kwezempilo. 'Ndandisoloko ndifuna ukuba ngumama,' utsho. 'Bendinkulu ubomi bam bonke, kodwa ndiye ndabona ukuba ubunzima bam abuchaphazeli nje kodwa buchaphazela ikamva lam.' Kwiiponti ezingama-300, waziva eneentloni zokuzilolonga esidlangalaleni, kodwa abazali bakhe babenendawo yokunyathela kwigaraji. Ndingalinda de wonke umntu alale, utshilo, ngaphambi kokuba angene egaraji ahambe. Inkqubela phambili yayihamba kancinci, ngamanye amaxesha kubuhlungu. 'Ndiphulukene ne-3 okanye i-4 yeepawundi ngenyanga kwaye ndizibuza ukuba ingaba kufanelekile, utshilo. Kodwa wanamathela kuyo, kwaye malunga nonyaka kamva waziva ekhululekile ngokwaneleyo ukuba angajonga i-aerobics kunye neeklasi zeJazzercise kwindawo yokuzivocavoca yendawo. Ngaphezulu kweminyaka eli-10 kamva, ngoku uneepawundi ezili-190 kwaye waba ngumqeqeshi weJazzercise. Uzamile ukudanisa ipole, i-yoga yasemoyeni, umdlalo wokukhahlela, ukhuphiswano lomdyarho kunye nokunye. Ndizichaze njengembaleki, utshilo. 'Ngaphambili, ndaziva ngathi andimenywanga kwitheko elikhulu lokuzonwabisa elalilungile. Ngoku, umzimba wam awufezekanga, kodwa ndiziva ndiyinxalenye yeqela. '
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Ukuhamba kwemizuzu engama-30 kwitreadmill, iintsuku ezintlanu ngeveki
UDarcey Elias UAlina Burroughs
UDarcey, ngoku oneminyaka engama-44, waye hamba malunga neepawundi ezili-190 xa umama wakhe waswelekayo. Utshilo ukuba: 'Ndibethwa lilitye zombini ngokomzimba nangobunzima bam,' utshilo. Wathuthela kwidolophu entsha malunga nexesha elifanayo. Ndandisondela kwi-40, ndingonwabanga kakhulu, kwaye ndindedwa kwindawo entsha kraca. Kodwa wayeziva ngathi unikwe ithuba lesiqalo esitsha, ke ukhuphele i-5K app yokuqala kwifowuni yakhe. Andiyiyo imbaleki ngaphambi kokusebenzisa iapp, 'ekuxelela ukuba utshintshe nini phakathi kokuhamba nokubaleka ngaphezulu kwemizuzu engama-30, uthi. Ndicinga ukuba ngekhe ndikwazi ukwenza i-5K, kodwa wakha usuku ngalunye ukusuka kwimpumelelo encinci kusuku olungaphambi kwalolo. Uqeqesha ingqondo yakho kwangaxeshanye uqeqesha umzimba wakho. ' Ufumene ukubaleka ukuncediswa yintlungu yakhe, naye. 'Kanye njengokuba intlungu yokubaleka iphelile ukugqiba kwam emva kwemizuzu engama-30, ndiye ndaziva ndingcono kancinci ngokwasemoyeni ekupheleni kogqatso, kwaye uhambo ngalunye lwakhula.' Kwaye wakhula: Wabaleka umdyarho wakhe wokuqala weminyaka emi-2 emva kokuthatha umdlalo, kwaye namhlanje ugcina i-50 yeepawundi yokunciphisa umzimba kunye ibhlog malunga nohambo lwakhe lokomelela komzimba .
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Ukubaleka / ukuhamba imizuzu engama-30, kathathu ngeveki
ULareen Womelele ULareen Womelele
Ngo-Epreli 2013, kwathi gqi kuLareen ukuba intombi yakhe yayiza kuya ekholejini kungekudala. 'Bendijolise kulo lonke eli xesha lokuba ngumama ongatshatanga kunye nomsebenzi omkhulu kwaye khange ndichithe xesha kum,' utshilo. Ngeepawundi ezingama-341, wagqiba enye indlela yokuzinika ingqalelo ekhethekileyo yayikukunciphisa umzimba. Ngexesha elifanayo, wabona ividiyo echaza izibonelelo zokuhamba ngemizuzu engama-30 yonke imihla. Kwakusabanda ngaphandle kwidolophu yakowabo e-Utah, ngenxa yoko wakhwela ibhayisekile emileyo endaweni yoko. 'Ndifuna kuphela ukwenza imithambo endinokuzibophelela kuyo ubomi bam bonke, utshilo. Ukuqala, wayenethamsanqa ukuba wayenokuhamba ngemizuzu eyi-12 ngokunganyangeki. Kodwa usebenze ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30, kwaye ngo-Epreli 2015 wayephantsi ukuya kwiiponti ezili-150. Ngoku, eneminyaka engama-56, ugcina ngokuqhubeka nokuhamba ngebhayisikile, ukuhamba kangangoko anakho, kunye nokuchitha impelaveki ngeempela-hambo.
I-555 ingelosi inentsingiselo
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Imizuzu engama-30 kwibhayisekile emileyo, iintsuku ezisi-7 ngeveki. Ngaphezulu, thatha amanyathelo ongezelelweyo apho kunokwenzeka khona: Paka kwikona ekude yokupaka, hamba ngexesha lekhefu, ushiye imoto kunye nentombi yakhe emsebenzini ugoduke.
U-Kat Carney Kat carney
Umntwana oneminyaka eyi-47 ovela eAtlanta, owenza iibhloko kwi TheWeighWeWere.com isetyenziselwa ukuhlala phantse ngokupheleleyo. Ndibe yinto onokuyibiza ngokuba yibhatata ecocekileyo, utshilo. Andikhange ndizilolonge, ndomelele emzimbeni, okanye ndinemvelaphi yezemidlalo. Bendicinga ukuba abantu abenza umthambo bayaphambana. ' Kodwa ukubona inani kwisikali kunyuka ngaphezulu kwe-240 kumenze waqonda ukuba lixesha lokwenza utshintsho. Waqala encinci, ehamba ngokulula kwitayitile yekhaya, esongeza umzuzu yonke imihla de abe uyakwazi ukuhamba imizuzu engama-30 ukuya kwengama-45 ngexesha. Ngelo xesha, wayephulukene nobunzima obaneleyo bokuziva ekhululekile ukuzama ezinye iiklasi kwindawo yokuzivocavoca, kwaye emva kweenyanga ezili-14 wayelahle iiponti ezingama-90. Kodwa, njengoko esitsho, 'ubomi buyenzeka,' kwaye iikhilogram ezingama-50 ekugqibeleni zaphinda zabuyela umva. Waqala ukuthathela ingqalelo imikhwa yomdlali webhola ekhatywayo owayehlala kwindlu yakhe, kwaye wamazisa kumqeqeshi. (Nazi izinto ezisi-8 wonke umntu oziqeqeshayo azaziyo kwaye nawe kufanelekile, nawe.) Kwakumalunga neminyaka emi-3 eyadlulayo, kwaye namhlanje unobunzima obuli-155 leeponti. Kum, ukungaguquguquki kubalulekile, utshilo. Ukusebenza kwam kumodareyitha, kuyatshintsha, kwaye kuchaziwe, kwaye ngoku ndinamandla kunangaphambili.
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Ukuhamba kwemizuzu engama-30, iintsuku ezintlanu ngeveki. Ukuqeqesha amandla kunye nomqeqeshi imizuzu engama-40, kabini ngeveki.
ULuz Rodriguez ULuz Rodriguez
'Bendihlala ndikhuthele, ndiyakuthanda ukutya okuninzi, utshilo uLuz, igqwetha elineminyaka engama-60, kodwa xa wayeqala ukuziva edangele kwaye enobuhlungu kwi-57, wayesazi ukuba ikhona into. Ngama-322 eepawundi, wayehamba ngebhayisikile ngoogqirha abambalwa abangazange bamthathe nzulu ngenxa yesisindo sakhe. Kodwa xa ekugqibeleni efumene umntu ozimisele ukumnika ukhathalelo olumfaneleyo, wothuswa ziziphumo: inqanaba 1 lomhlaza we-ovari. I-Chemotherapy ikhokelele ekulahlekeni kobunzima beepawundi ezingama-80, kwaye kulapho ke wagqiba kwelokuba ajoyine iRetro Fitness Gym, ebekwe ngokufanelekileyo kwisakhiwo esinye neofisi yakhe. Apho, wathetha nabaqeqeshi malunga nenjongo yakhe yokugqibezela uhambo lwe-Avon 39 lomhlaza webele ukuhlonipha oomakazi bakhe ababebulewe sesi sifo.
Namhlanje, i-Luz iphantsi kweepawundi ezili-152 kwaye ibingenayo i-chemo-free unyaka. Ujonge ukwehla malunga neeponti ezingama-20 ukufikelela kubunzima bakhe obuyi-140. Ndigcina umfanekiso wento endandihlala ndinayo ukuze ndizikhuthaze. Kuza kwenzeka. ' Wongeze i-yoga kunye ne-Pilates kwisiqhelo sakhe, kwaye uya kugqiba uhambo lweemayile ezingama-39 okwesibini kule-Okthobha, ngeliso lakhe lokubaleka umdyarho weNew York City 2017.
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Imizuzu engama-45 ukuya kweyure eli-1 yokuhamba / ukugijima kumatshini wokunyathela okanye kumatshini wokubheqa, iintsuku ezi-5 ukuya kwezi-6 ngeveki, kunye nosuku olunye loqeqesho lwesekethe enobunzima
USuzanne Andrews suzanne andrews
Umsunguli oneminyaka engama-53 ubudala kunye nomgcini weFitness Fitness kwi-PBS kunye nomongameli we EzeSixHanElisen.com kulindeleke ukuba imvelaphi yakhe yokomelela komzimba iza kuluncedo emva kokubeleka kwiminyaka engama-30. 'Ndandinama-186 eepawundi, kwaye kuba ndineminyaka nje eyi-5'2', ndandingakhululekanga kakuhle, utshilo. Uxinzelelo olongezelelekileyo kumalungu akhe ukusuka kula maphawundi ongezelelweyo lwenza ukuba onke amanyathelo abonakale; Ukuhamba ukuya kuphala iiponti kwakungekho mbuzo. 'Ingcali yezomzimba yandinceda ukuba ndiqonde ukuba ukuzilolonga yeyona nto bendifanele ukuyenza ukuphelisa iintlungu,' utshilo, kwaye wazilungiselela kwangoko indlela ahlala ngayo phantsi. 'Ayizukuwonzakalisa amalungu am, kwaye ndingaqhubela phambili ukuya kwinqanaba elinzima,' uyachaza. 'Bendingazi ukuba ndiyila umxholo wenqaku lam elizayo le-PBS!' Ukwazisa ukucamngca ngelahleko yakhe yeepawundi ezingama-60. Inyathelo lokuqala lokunciphisa umzimba liqala engqondweni yakho, utshilo.
Ukusebenza komzimba okuqhelekileyo: Cinga imihla ngemihla imizuzu eli-10, uzibonele ubunzima bakhe beenjongo, kunye nemizuzu engama-30 yokuzivocavoca isitulo yonke imihla, kubandakanya ubunzima kwi-2 ukuya kuma-3 amaxesha ngeveki
izihlangu ezilungileyo zokusebenza ezinyaweni zakho
ningathatha i-tylenol kunye ne-ibuprofen kunye
chakra yealventurine eluhlaza
Ithetha ukuthini xa ubona i-333